မင်္ဂလာဆောင်ပြီး (၅) မိနစ် လောက်တောင် မပျော်လိုက်ရရှာတဲ့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့အဖြစ်.. – Barnyar Barnyar
မင်္ဂလာဆောင်ပြီး (၅) မိနစ် လောက်တောင် မပျော်လိုက်ရရှာတဲ့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့အဖြစ်..
ငယ်ငယ်ကတည်းက အတူကြီးပြင်း အတူတူ ဆော့ကစားခဲ့ကြပြီး၊ ချစ်သူ ဘဝကို ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ စောစီးစွာ တက်လှမ်းခဲ့ ကြတဲ့ မင်္ဂလာ ဇနီးမောင်နှံ ကတော့ ထင်မှတ် မထားတဲ့ အဖြစ်ဆိုးကြောင့် မင်္ဂလာဆောင်ပြီး မိနစ်ပိုင်းလေး မှာပဲ သေဆုံးခဲ့ရ ပါတယ်။
အဲဒီဇနီးမောင်နှံဟာ အသက် (၁၉) (၂၀) အရွယ်သာ ရှိကြ ပါသေးတယ်။ ဇနီးဖြစ်တဲ့ Harley Morgan ဖြစ်ပြီး သူမကတော့ အသက် (၁၉) နှစ်ပါ။ ခင်ပွန်းကတော့ Rhiannon Boudreaux ဖြစ်ပြီး အသက် (၂၀) လို့ သိရပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဗြိတိန် အခြေစိုက် The Sun သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့တာပါ။
နှစ်ယောက်စလုံးဟာ မင်္ဂလာကားနဲ့ မင်္ဂလာခန်းမကနေ ထွက်ခွာလာပြီး မကြာမီမှာပဲ ဆိုးရွားလှတဲ့ ယာဉ်မတော်တဆမှုကို ကြုံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ခန်းမကနေ ထွက်လို့ ငါးလမ်းသွား အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်ကို အရောက်မှာ အရှိန် မထိန်းနိုင်တဲ့ ထရပ်ကား တစ်စီးက ဝင်အောင်းတာကို ခံလိုက်ရ ပါတယ်။
ကားလေးဟာ လမ်းမပေါ်မှာ ဒလိမ့်ကောက်ကွေး ပုံစံနဲ့ အပတ်များစွာ လည်ပြီး၊ မြောင်းထဲကို ပြုတ်ကျသွားပါတယ်။ အခင်းဖြစ်နေရာကို ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ အမြန်ရောက်လာခဲ့ ကြပေမယ့်၊ ကျေမွနေတဲ့ ကားထဲကနေ သူတို့ကို အတော်လေး ဆွဲထုတ်ခဲ့ရ ပါတယ်။
မင်္ဂဆာင်ပြီး (၅) မိနစ် လောက်တောင် မပျော်လိုက်ရရှာတဲ့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့အဖြစ်…. 4
နှစ်ယောက်စလုံး သေဆုံးသွား ခဲ့ပြီး၊ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု ကတော့ အတော်လေးကို ယူကြုံးမရ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ထရပ်ကားမောင်းသူ ကိုတော့ စစ်ဆေးနေဆဲ ဖြစ်ပြီး၊ သူ့အဆိုအရတော့ မင်္ဂလာကားက လမ်းမကြီးကို ဦးစားပေးရမယ့် အစား၊ ကွေ့ကြောကနေ ဇွတ်ထွက်လာလို့ ဖြစ်တာလို့ ပြောပါတယ်။
source — bamakhit
မင်ျဂလာဆောငျပွီး (၅) မိနဈ လောကျတောငျ မပြျောလိုကျရရှာတဲ့ ဇနီးမောငျနှံရဲ့ အဖွဈ
ငယျငယျကတညျးက အတူကွီးပွငျး အတူတူ ဆော့ကစားခဲ့ကွပွီး၊ ခဈြသူ ဘဝကို ဆယျကြျောသကျအရှယျမှာ စောစီးစှာ တကျလှမျးခဲ့ ကွတဲ့ မင်ျဂလာ ဇနီးမောငျနှံ ကတော့ ထငျမှတျ မထားတဲ့ အဖွဈဆိုးကွောငျ့ မင်ျဂလာဆောငျပွီး မိနဈပိုငျးလေး မှာပဲ သဆေုံးခဲ့ရ ပါတယျ။
အဲဒီဇနီးမောငျနှံဟာ အသကျ (၁၉) (၂၀) အရှယျသာ ရှိကွ ပါသေးတယျ။ ဇနီးဖွဈတဲ့ Harley Morgan ဖွဈပွီး သူမကတော့ အသကျ (၁၉) နှဈပါ။ ခငျပှနျးကတော့ Rhiannon Boudreaux ဖွဈပွီး အသကျ (၂၀) လို့ သိရပါတယျ။ ဒီသတငျးကို ဗွိတိနျ အခွစေိုကျ The Sun သတငျးဌာနက ဖျောပွခဲ့တာပါ။
နှဈယောကျစလုံးဟာ မင်ျဂလာကားနဲ့ မင်ျဂလာခနျးမကနေ ထှကျခှာလာပွီး မကွာမီမှာပဲ ဆိုးရှားလှတဲ့ ယာဉျမတျောတဆမှုကို ကွုံခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့နှဈယောကျဟာ ခနျးမကနေ ထှကျလို့ ငါးလမျးသှား အမွနျလမျးမကွီးပျေါကို အရောကျမှာ အရှိနျ မထိနျးနိုငျတဲ့ ထရပျကား တဈစီးက ဝငျအောငျးတာကို ခံလိုကျရ ပါတယျ။
ကားလေးဟာ လမျးမပျေါမှာ ဒလိမျ့ကောကျကှေး ပုံစံနဲ့ အပတျမြားစှာ လညျပွီး၊ မွောငျးထဲကို ပွုတျကသြှားပါတယျ။ အခငျးဖွဈနရောကို ဆှမြေိုးသားခငျြးတှေ အမွနျရောကျလာခဲ့ ကွပမေယျ့၊ ကမြှေနတေဲ့ ကားထဲကနေ သူတို့ကို အတျောလေး ဆှဲထုတျခဲ့ရ ပါတယျ။
မင်ျဂဆာငျပွီး (၅) မိနဈ လောကျတောငျ မပြျောလိုကျရရှာတဲ့ ဇနီးမောငျနှံရဲ့အဖွဈ…. 4
နှဈယောကျစလုံး သဆေုံးသှား ခဲ့ပွီး၊ ကနျြရဈသူ မိသားစု ကတော့ အတျောလေးကို ယူကွုံးမရ ဖွဈနကွေပါတယျ။ ထရပျကားမောငျးသူ ကိုတော့ စဈဆေးနဆေဲ ဖွဈပွီး၊ သူ့အဆိုအရတော့ မင်ျဂလာကားက လမျးမကွီးကို ဦးစားပေးရမယျ့ အစား၊ ကှကွေ့ောကနေ ဇှတျထှကျလာလို့ ဖွဈတာလို့ ပွောပါတယျ။
ဇနီးသည်ရဲ့ ချစ်မေတ္တာကြောင့် ကိုမာဖြစ်နေရာကနေ ပြန်လည်နိုးထခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
နာနတ်သီးရောင်းကောင်းစေဖို့ ဆံပင်ကို နာနတ်သီးပုံစံညှပ်ခဲ့သူ၊ တကယ်လည်း အလုပ်ဖြစ်ခဲ့